"Philips" - vacuum cleaner okwesikhathi nokuhlanzeka ephelele endlini
isilawuli Uthuli nganoma yisiphi wekhaya yinqubo kumele efulethini yokuhlanza. Instruments ezisiza kule nqubo, kukhona ezihlukahlukene kakhulu. Inqubekela akemi namanje - izinkampani adumile ukunikela sonke isikhathi, onobuhle ezintsha kanye ukuhlela kabusha. Zisetshenziswa womshini imikhiqizo yayo ubuchwepheshe bamuva. Kodwa uma unentshisekelo ngendlela ehlanzekile, makudle abakhiqizi owaziwa kanye nemikhiqizo yayo. It kudingeka siyinake abathengi wezindlu "UPhillips-9174." It yenzelwe zokuhlanza owomile.
Iyunithi has a zakudala uthuli isikhwama okuyinto yokuhlala amalitha amane. Susa kalula kakhulu. Kukhona washable isihlungi HEPA-13 futhi emihle yokuhlanza AirSea. Idivayisi ihlinzeka amandla uthuli ukuncela ukuze Watts 500. Encwadini yakhe ethi kwakhiwa emoyeni ageleze 47 l / s.
Hhayi lutho imikhiqizo ukuqashelwa esizifanele kukhona "Philips". Vacuums kusukela kule nkampani njalo has izesekeli ezengeziwe. Le kit ngokuvamile uhlanganisa Imibhobho esemzimbeni ekhethekile: crevice encane, Tri-Active, Turbo ibhulashi. Unit kusukela kule nomkhiqizi ukuhambisa kalula emhlabeni efulethini. Ubude ikhebula salo amamitha ayisishiyagalolunye. Ngaphezu kwalokho, kukhona isibambo ukuthwala. Basuke elise phezulu futhi phambi iyunithi. Idivayisi ixhunywe amapayipi, bese yayo 2200 Watt motor iyasebenza at zigcwele. I engaba wesenzo - amamitha nambili.
Oluqanjwe "Philips" cleaner wezindlu kwanoma iyiphi ukuguqulwa has amasondo zenjoloba ukuthi siwenze wonke amasondo kanye telescopic tube lensimbi akhiwa izingxenye ezimbili. Isisindo kudivayisi uqobo mayelana 6 kg. Lapho isikhwama uthuli ugcwele, ebonisa ekhethekile ikhanyisa, okuyinto ekahle kakhulu. Emva kokuphothula kudivayisi yokuhlanza kungenziwa ucishiwe esebenzisa inkinobho ngezinyawo, okuyinto ekhona emzimbeni wayo. Lapha itholakala namandla Regulator. Intambo yamandla is nilimaza ngokuzenzakalelayo.
On the "Philips" vacuums ikhasimende libuyekeza omuhle kakhulu. Abathengi ukuza kujabule umthamo unit, ukuhlanza izinga, operation lula. Ngakho, ngemva ekwelapheni umata kubonakala sengathi kwaba elondolo. Iphele hhayi kuphela uthuli, kodwa futhi izinwele isilwane. Ngenxa amasondo a cleaner elula wezindlu zingasuswa amafulethi kalula. Nokho, lokhu akusho ukuthi bhala phansi, futhi kulula ngokulinganayo ukuze udlulele iyiphi indawo, ngisho naseziqhingini amapulangwe aphansi. Ngokusho abathengi, oluqanjwe "Philips" cleaner wezindlu - ekahle yokuhlanza. Isebenza buthule. Phakathi sokuvuna akusho uvuke nalo ngisho ingane, nezilwane musa sokuveza ukukhathazeka kwabo. Ngenxa ekhethekile HEPA isihlungi iyunithi uyakwazi ukudoba uthuli encane kakhulu. Amathiphu ezimbalwa ezikhethekile unike amandla kukhishwe ukungcola kusuka izindawo eziqhele kakhulu. Ngaphandle isikhwama alahlwayo sokuthutha udoti, idivayisi iza esebenza, okuyinto unga ezinhle.
Abathengi abakhetha brand "Philips", vacuum cleaner kwanoma iyiphi imodeli kusukela kule nomkhiqizi ibizwa ngokuthi enamandla futhi kulula ukuyisebenzisa. It inekhono, nomthamo uthuli iqoqo esitsheni. Lapho ukuhlanza Akubalulekile goba. Ngokuvamile, imicengezi endlu Imishini kusukela "Philips" aneliseke ukuthenga kwabo futhi batusa imikhiqizo lenkampani ukuthenga, ngaphandle kokungabaza.
Soundbar - kuyini? Soundbar: intengo, abakhiqizi, ukubuyekezwa, ukubuyekeza
Amarekhodi Military - Iyini? Imigomo Nezindlela Izinhloso
Isipho ezishisayo - Brazil namantongomane. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka